MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-04-28
KIA Masat (2) Dap Ba Masat (5) Dap Dung makawp maga ginra Namhkyi maw mayan hkan shang shamu shamawt chyinglau hkawm nga ai Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (93) Dap na hpyen hpung ni hpe KIA Masat (5) Dap Dung na hpyen hpung ni 2013 May (3) ya shani hkying (5:20)pm aten ram hta hkrum katut gasat poi byin ai lam hpe chjye lu ai.
at 5/04/2013 05:10:00 PM No comments:
at 5/04/2013 01:08:00 PM No comments:
at 5/04/2013 12:19:00 PM No comments:
(Kachin Duwa FB)
at 5/04/2013 12:16:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေတပ်မဟာ (၄) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ တပ်ရင်း (၃၈) နယ်မြေတွင် မေလ (၂) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၁း၄၅) အချိန်ခန့်တွင် မြန်မာစစ်တပ် ခလရ (၂၅) မှ စစ်သားများ မန်ဂျပ် (Mang Jak Mare) ကျေးရွာတွင် စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှား လာပြီး အေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၈) မှ တပ်သားများဖြင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းနေ့ ညနေ (၇း၄၀) အချိန်ခန့်တွင်လည်း အေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ကောင်ဆာ (Kawng Sa) နှင့် ဖိုင်ကောင် (Hpai Kawng) ကျေးရွာအကြားတွင် KIA ပြည်သူ့ စစ်များနှင့် ကွတ်ခိုင် အခြေစိုင် မြန်မာစစ်တပ် ခလရ (၂၄၂) (ဟု ခန့်မှန်း) တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ (KACHINNET)
at 5/03/2013 10:48:00 PM3comments:
at 5/03/2013 09:55:00 PM No comments:
KIA Masat (4) Dap Ba Masat (38) Dap Dung makawp maga ginra kata hta 2013 May (2) ya shani hkying (1:45) pm aten ram Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (125) na hpyen hpung ni Man Jak mare de shang shamu shamawt chyinglau hkawm nga ai kaw KIA Masat (38) Dap Dung na hpyen hpung ni hte hkrum katut gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
at 5/03/2013 05:04:00 PM No comments:
KIA Masat(5) Dap Ba, Masat (3) Dap Dung makawp maga ginra kata na Hkang Bu ja maw kaw 2013 May (1) ya shani hkying (1:30)pm aten ram hta Waimaw Muklum kaw na Myen Asuya Balik Dap n-gun (70) ram gaw Mawdaw (8) hte lung wa nna ja htu sha nga ai Lauban ni hte hkawngma yawng marai (50) ram hpe ja htu jak (30) hte hpawn sa rim woi la mat ai lam hpe chye lu ai.
ကချင် ပြည်နယ် ဖားကန့် ဒေသမှာ မွတ်ဆလင်တွေ ပိုင်တဲ့ ကုန်မာဆိုင် သုံး ဆိုင် ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၅နာရီ ဝန်းကျင်က ဖားကန့် ဒေသမှာ ဆိုင်းတောင်လို့ လူသိများတဲ့ စဉ့်ငူ ရွာက မွတ်ဆလင်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်၊ ဝင်းမေတ္တာနဲ့ မလိခ စတဲ့ ကုန်မာဆိုင် သုံးဆိုင်ကို လူ ၁၀၀ ကျော်က ဝိုင်းပြီး ဖျက်ဆီး လိုက်တယ်လို့ ဒေသခံ တွေက ပြောပါတယ်။ ---
at 5/03/2013 10:11:00 AM 1 comment:
အစိုးရ တပ်များသည် တိုင်းရင်းသား တပ်များ အပေါ်စစ်ရေး အပေါ်စီး ရရှိစေရန် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မရပ် ခဲ့သည်ဖြစ်စေ တိုင်းရင်းသား ဒေသများသို့ စစ်တပ် အင်အား တိုးချဲ့ ချထား နေခဲ့ဖြစ်သည်ဟုနယ်စပ် စစ်ရေး အကဲခတ် များကဆိုပါသည်။
“ အစိုးရ ကတော့ သူတို့မှာ ရှိနေတဲ့ ကကကြည်းရဲ့ အရန် အင်အား ထဲကတပ်မ အားလုံးကို လူမျိုးစု နယ်မြေထဲကို ပို့ထားပါတယ်။ တပ်လဲ စရာတောင် မကျန်တော့ဘူး။ တပ်မ (၇၇) နဲ့တပ်မ (၆၆) က လွဲလို့ပေါ့။ ဒါကို ကြည့်ရင် အပစ်အခတ် ရပ်ရေးမှာနေရာ ယူပြီး အပေါ်စီးကနေရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆိုပါသည်။
at 5/03/2013 09:01:00 AM No comments:
at 5/03/2013 08:59:00 AM No comments:
အမေရိကန်သံရုံးက နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သံအရာရှိနဲ့ကယားပြည်နယ်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့ငါးဖွဲ့တို့ဟာ မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေးနဲ့ ပညာပေးရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ ကရင်နီပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးရုံးမှာ တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပြီး အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)က တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
at 5/03/2013 08:56:00 AM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Mungchying Uphkang Dap, Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Mungshawa Hpyen HpungaMasat Yan (1) Hpyen Gyi (N.C.O) Wunkat Jawng Yu Hpawng hpe, Ninghtoi;- 2/5/2013 ya shani, Jahpawt Hkying 10:00AM kawn 12:00PM ten laman ngwi ngwi pyaw pyaw galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. Ndai Hpyen Gyi (N.C.O) Wunkat gaw Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Mungshawa Hpyen HpungaNumbat langai lang ngu na Wunkat re lam hpe mung na chye lu ai.
at 5/02/2013 03:02:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွန်လုံနဲ့ သိန္နီမြို့နယ်က မန်လွန်နဲ့ နားတီးရွာမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေဟာ အကူအညီ လိုအပ်နေတယ်လို့ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေက ပြောပါတယ်။
at 5/02/2013 09:56:00 AM No comments:
at 5/02/2013 08:54:00 AM No comments:
at 5/02/2013 08:51:00 AM No comments:
at 5/01/2013 10:49:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Ginjaw Hkamja Dap kawn woi awn galaw ai Masat yan (3) ngu na Hkamja Du Wunkat hpaw hpawng lamang hpe April (30) ya jahpawt hkying (22:00AM) tem hta Laiza Muklum kaw galaw lai wa sai lam shiga na chye lua i. Lamang hta Lat Du Up Jum Lahpai Hing Wawm kawn hpawng hpaw mungga tsun ya sai lam na chye lu ai. Ndai Hkamja Wunkawt hta Ginwang Ginjaw shagu de na tsi magam gun ni sa du sharin hkam la na rai nna, sharin ladaw shata (3) rai na re lam hpe mung matut na chye lu ai.
at 5/01/2013 10:46:00 PM No comments:
ယင်းကဲသို့ သစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းများ ထုတ်ယူလာသည်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လနောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲများ စတင်ချိန်မှစပြီး အရှိန်မြင့်တက်လာကြောင်း၊ နယ်မြေမအေးချမ်းသည့်အပေါ်
at 5/01/2013 06:57:00 PM No comments:
မြန်မာပြည် မှာ လူမျိုး ၁၃၅မျိုးရှိတယ် ဆိုပြီး စစ်အစိုးရ မီဒီယာတွေမှာ ခဏဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ ပြောပြောနေတာက လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးတောင်ရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အခု လက်ရှိပြည်နယ်တွေကိုပဲ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပေးမလဲ ပေါ့။ ဒါက လူမျိုးများလေ ဗမာ အကြိုက်တွေ့လေ ဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်းပါ။
အမှန်ဆိုရင် ၁၃၅ မျိုးဆိုတာ လူမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ဒေဒိယ ဘာသာစကားကွဲတွေပါ။ အင်္ဂလိပ် ခေတ်က ဘာသာစကားလေ့လာသူတွေက မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ဒေဒိယ ဘာသာစကားကွဲတွေ အကြောင်း ကျမ်းပြုစုထားတာကို နေ၀င်း အစိုးရ က ၀ါဒဖြန့်စာ လုပ်လိုက်တယ်။ လူမျိုးဆိုပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ အခုလဲ ထိုနည်း၎င်းအတိုင်း ပြုမူနေဆဲပဲ။
at 5/01/2013 03:33:00 PM No comments:
at 4/30/2013 07:48:00 PM No comments:
at 4/30/2013 05:04:00 PM No comments:
at 4/30/2013 04:28:00 PM No comments:
at 4/30/2013 02:55:00 PM No comments:
at 4/30/2013 10:45:00 AM No comments:
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ကချင် KIO နှင့် အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ် တရုတ်ပြည် ရွှေလီမြို့၌ စစ်ပြေငြိမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ တို့က ယမာန်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် မွန်ဂိုမြို့နယ် ဂေါင်ဆွမ် ကျေးရွာအနီး၌ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟု KIA အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
“ ကျနော်တို့ KIA တပ်မဟာ (၄)က တပ်ရင်း ၃၈ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုင်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေက နေ့တိုင်း လိုလို တပ်အင်အားတွေ တိုးလာနေတော့ ကျနော်တို့ နယ်မြေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ရတာ ပါ။” ဟု ဆိုပါသည်။
at 4/30/2013 10:39:00 AM No comments:
at 4/29/2013 11:35:00 PM No comments:
at 4/29/2013 08:54:00 PM No comments:
at 4/29/2013 02:00:00 PM No comments:
KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (38) Dap Dung makawp maga ginra Gawn Sam hte Kawng Hkam mayan kaw 2013 April (28) ya shana maga hkying (2:20)pm aten ram hta Kuthkai kaw daju ai Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (242) Dap na hpyen hpung ni shamu shamawt chying lau hkawm nga ai kaw KIA Dap Dung (38) na hpyen hpung ni hte hkrum katut ai majaw gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
at 4/29/2013 01:58:00 PM No comments:
at 4/28/2013 11:13:00 PM No comments:
2013 April (25) ya shana hkying (3:30)pm aten ram hta KIA Masat (1) Dap Ba, Masat (10) Dap Dung makawp maga ginra, Lawk Hkawng Ginwang, Pangwa mayan na KIA Padang Sector hpyen hpung ni shara la nga ai Chik Jaw hkyet lam mayan kaw Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (10) hte Hk.L.Y (74) na pawng hpawm hpyen hpung ni wang htim gasat lung wa ai majaw KIA Padang Sector na hpyen hpung ni kaw nna ninghkap gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
at 4/28/2013 07:16:00 PM No comments:
at 4/28/2013 07:12:00 PM No comments:
Jinghpaw Mung Myitkyina - Danai Lidu lam mayan hta myen hpyen hpung ni sharaw wan nat shabra nga ai lam buga masha ni kawn na chye lu ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIA myu tsaw share ninghkring ni kawn mayun gap na hpe hkrit tsang ai majaw ya na zawn shara shagu sharaw wan hkan nat hkawm nga ai re lam na chye lu ai. Myen hpyen ni ya na zawn sharaw wan nat aiamajaw April (26) ya shani ka-ang hkying (12:00) ten ram hta Wara Zup Mare mung shawa niadum nta (48) sharaw wan hkra hku lawm mat sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 4/28/2013 09:47:00 AM No comments: